Kooxda Barcelona oo kaliya 48 saacadood u qabtay Ousmane Dembele… (Sidee wax u jiraan?) – Gool FM
Haaruun January 17, 2022
(Barcelona) 17 Jan 2022. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa la soo warinayaa inay Ousmane Dembele u qabtay kaliya 48 saacadood oo uu heshiis cusub ugu saxiixayo ama uu kooxda isaga tagayo.
Barca waxa ay halis ugu jirtaa inay lumiso ciyaaryahan Ousmane Dembele, waxaana ay kooxda reer Spain xiddiga reer France siisay 48 saacadood oo uu ku ga’aansado mustaqbalkiisa.
24-sano jirkaan Faransiiska ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku jiray wadahadallo heshiis kordhin ah balse waxaa la wariyey in wadahadalladaasi ay soo dhammaadeen, iyadoo sidoo kale la sheegay inuu tiro kooxo ah dalabyo ka helay oo ay miiska u soo saareen heshiisyo cusub.
Weeraryahankii hore ee Borussia Dortmund ayaa la warinayaa inuu qorsheynayo inuu sii joogo garoonka Camp Nou, laakiin waxa uu ka walaacsan yahay qiimo dhimista lagu sameeyey heshiiska.
Barca ayaan hadda awood u lahayn inay Dembele u soo bandhigto heshiis cusub oo mushaharkiisa sare loogu qaadayo, maxaa yeelay mushaharka uu haatan qaato ayaaba ah mid ku badan.
Waxaa lakala ogaan doonaa go’aanka Dembele 48-da saac ee soo aaddan, haddii uu go’aansado inuu sii joogo Barcelona iyo haddii uu dalbado inuu tago oo uu u sheegay kooxda inuu dhaqaaqayo.
Dembele ayaa si rasmi ah Barcelona ugu soo biiray sanadkii 2017-kii, waxaana uu 96 milyan oo gini kaga soo dhaqaaqay naadiga Borussia Dortmund, yeelkeede dhaawacyo hareeyey ayaa sababtay in kaliya 87 kulan oo La Liga ah uu u ciyaaro kooxda, iyadoo ay xusid mudan tahay inuu lix kulan oo qura ku soo billowday safka hore xilli ciyaareedkan.